Marar badan aad iPhone kor yimaado iyadoo qaar ka mid ah qeybo ka mid khaldan oo aad rabto in aad ku baddallo kuwa cusub si sii isticmaalaya telefoonka flawlessly. Si lagaaga caawiyo in aad sida macnaha guud, halkan waxaa ku qeybo ka iPhone yar waxaa inta badan loo bedelay adduunka oo dhan.
Fiiro gaar ah: The talooyin iyo talooyinka ka mid ah dayactir halkan siisayba inay u iPhone 6 / iPhone 6 kaliya Plus. Haddii aad qabto model kasta oo kale oo iPhone, waxaad raaci kartaa xiriirka u dukaanka online (ka dib in qodobkan la siiyo) iyo model aad iPhone taas oo aad rabtid in aad iibsato dayactir dooran.
iPhone w Golaha Display. Camera Front
Shirka Tani waxay ka kooban bandhigay LCD, Front Panel Glass / Digitizer, bahal Guddoomiyaha, Camera Front oo ah Plate LCD Shield. Complete shirka Tani waxaa loo baahan yahay in la beddelo marka uu ka badan mid ka mid ah qaybaha kor ku xusan ka wada hadleen ay leeyihiin shirkan aad waxyeelo aad iPhone.
Golaha Display iPhone sidoo kale yimaado oo aan camera hore oo waa la isu eego jaban. Golaha Display iPhone aan camera hore kama timaado maalkuu leeyahay afhayeenka bahal midkood.
Price: $ 170 - $ 175 (Qiyaas ahaan)
Ilaalinta: Si loo ilaaliyo circuit taas oo idil, waa in aad ka fogaato keeno aad iPhone in xiriir toos ah jirka la jirkaaga marka dhidid. Inta lagu guda jiro rabtay ama hawlaha kale ee jirka, doorbidaan isticmaalaya gacan-ku oo bilaash ah (banki ama Bluetooth) si looga fogaado dhaawac kiniisadda.
Golaha Button iPhone Home
Golaha iPhone Home Button ka kooban yahay badhanka Home asalka u ah iPhone oo ay la socdaan ay cable isku xira. Cable xira waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro button Home guddiga circuit iPhone lagu jiro bedel.
Sababtoo ah ay heerka dhisay, mid button Home noqon kartaa la jaan qaada daydo iPhone badan. (Waa in aad hubiso liiska lagu daydo iPhone taageeray u button Home in aad rabto in aad u soo iibinno bedelka.)
Price: $ 30 (Qiyaas ahaan)
Ilaalinta: Iska ilaali codsanaya cadaadis aan loo baahnayn badhanka Home ah. Xaaladdan oo qiilqiil iPhone (uma badna), samir ama isticmaal badhanka Power in ay reboot telefoonka halkii codsanaya cadaadis aan loo baahnayn loogu durations dheer (ama durations gaaban) badhanka Home ah.
iPhone hillaac Xire iyo Headphone Jack
Complete hillaac Xire Golaha waxa ku jira isku-dhafan headphone Jack, makarafoonka hoose, iyo isku xira hillaac. Shirka ayaa waxaa loo baahan yahay in la beddelo marka qaar ka mid ah ama dhammaan qaybaha Bannaanka jira noqon khaldan ama ku guuldareysato inay si fiican u shaqeeyaan.
Waxaa la doorbidaa in lagu badalo shirkii oo dhan, halkii ay de-kabida / kabida, qayb kasta oo waxyeelo si gaar ah, gaar ahaan marka in ka badan hal qaybo waxyeelo.
Price: $ 24 - $ 30 (Qiyaas ahaan)
Ilaalinta: Same sida ilaalinta Golaha iPhone Display ah (leh ama aan lahayn Camera Front), iska ilaali isticmaalaya iPhone marka dhidid. Haddii ay dhacdo in la isticmaalo telefoonka lagu jiro rabtay ama hawlaha kale ee jirka, door bidaan ah gacan-ku oo bilaash ah ka badan adigoo isticmaalaya telefoonka si toos ah.
goomahooda Button iPhone Home
Tani gabal yar ayaa la isticmaalaa si uu u qabto badhanka Home of iPhone ah. Sababo la xiriira tirada caadiga ah ee button Home in lagu daydo iPhone ka versions caadiga ah waxay leeyihiin, hal goomahooda ah Button iPhone Home badan tahay inuu la jaan qaada iPhone badan. (Laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u hubiso ka socon ee lagu daydo iPhone halka iibsigu goomahooda in bedel.)
Ilaalinta: Iska ilaali codsanaya cadaadis badan badhanka Home ah. Sidoo kale iska ilaali isticmaalaya qalab la fiiq ciidduu ka telefoonka ka saar. Isticmaal maro marada-free jilicsan halkii. Ka hortag iPhone ka tagtey ka Heights, gaar ahaan meelaha ay adag tahay sida lagu tumo goolad, wadada laamiga, iwm
Camera iPhone Rear
Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan oo inta badan loo isticmaalo ee iPhone ah. Camera heli gaari karaan sababo dhowr ah ay ka mid yihiin dillaacin, sababtoo ah ee telefoonka ka dhacay meelaha sare, gashto qaadan cuncun sababta oo ah gacan ku qabasho xooggan, dheecaan gelayno Bannaankii oo dhaawac, iwm
Price: $ 60 (Qiyaas ahaan)
Ilaalinta: Iska ilaali inaad ku xoqeen (khilaaf sare) iPhone ka dhanka ah meelaha ugu adag ka dhisan camera aasaasiga ah, iska ilaali jerks lama filaan ah ama tagtey ka meelaha, iwm
iPhone Wi-Fi anteeno
Tani shirka Wi-Fi anteeno ka caawinaysaa iPhone in ay ku xidhmaan network kasta oo wireless heli karo si sahlan. Xaaladdan oo shirka ka jabo, mid cusub laga iibsan karaa oo bedelay meel khaldan.
Price: $ 20 (Qiyaas ahaan)
Ilaalinta: Waxaad ilaalin kartaa anteeno Wi-Fi aad iPhone by waxaa laga fogaado uga ilaaliso bandhigi qorraxdu si toos ah u saacadood wayn, ka fogaanaya wax kasta oo dareere ah in la shahwadiisii ​​ku telefoonka, iska ilaalinta jerks lama filaan ah in taleefanka, iwm
Tebin iPhone waxaa loo isticmaalaa marka aad qortid iPhone on speakerphone taleefoonka cod. Alaabta Tani, inkastoo optional, waxa laga iibsan karaa in kiiska speakerphone hadda noqonayaa khaldan.
Ilaalinta: Ka fogow daadinta dareere kasta oo aad iPhone, gaar ahaan meel u dhow mid ka mid ah iridda qalabka. Iska ilaali inaad u tagtey uu saaran yahay meel adag sida sagxad goolad ama wadada laamiga.
iPhone Home Button Cable (Cable oo kaliya)
Piece Tani waa cable ah in loo isticmaalo in ay ku xidhmaan ah button iPhone Home guddiga screen / macquulka ah. Walaal A ee cable tani waa mid ka mid ah la LCD ku lifaaqan oo la isticmaali karaa haddii labada iyaga ka mid ah waxaa loo baahan yahay in la bedelo. Wixii xaaladaha ay labada button Home ah iyo daaha waa Gaf-free, iibsata cable badhanka iPhone Home noqon lahaa bet ugu wanaagsan.
Price: $ 15 (Qiyaas ahaan)
Ilaalinta: Iska ilaali in aad ku tiriska iPhone in deegaanno ka qoyan u durations dheer, iska ilaali jerks lama filaan ah aad u iPhone, ilaanshan kasta oo qayb ka cuni karo ama daadinta kasta oo dheecaan / non-consumable consumable aad iPhone, iwm
Best Place in iibso dayactir u iPhone
Inkasta oo aad ka iibsan kartaa dayactir loo baahan yahay si aad u iPhone meel kasta, waxaa jira dukaamada online yar waxaa laga yaabaa in aad ka fiirsan sidoo:
Fiiro gaar ah: Marka laga dukaanka ka meesha aad ka iibsan, mar walba hubso in aad ka qayb dukaanka firaaqada ah ku kalsoon tahay iibsato qaybaha asalka iyo in dayactir la jaanqaadaan model aad iPhone. Isticmaalka nuqul ama qaybo ka leheyn yareeyo nolosha ee iPhone ama dhaawici kartaa telefoonka si joogto ah.
Inkastoo ay fududahay in la badalo inta badan qaybaha khaldan ee aad iPhone ay adiga kuu gaar ah, haddii aad ku cusub tahay wax soo saarka Apple, hubin waxaad samaynayso, ama aadan si fiican u fahmaan farsamo ah, waxaa lagu talinayaa inaad la xiriirto Apple ee idman Xarunta adeegga iyo aad u hesho qayb ka mid ah oo khaldan (s) bedelay shaqaalaha xirfad leh.
> Resource > iPhone > iPhone Bedelaadda Qaybo: Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato